Ngingakwazi yini ukwandisa uhlu lwe-Amazon lithembele ekuhlangenwe nakho kwami ​​okudala nge-Google?
Njengawo wonke ama-injini yokusesha, akukho mhlahlandlela wokugcina noma isinyathelo-by-step imfundo yokwandisa uhlu lwe-Amazon ngendlela engcono kakhulu yokuhola izincintiswano ze-niche nhlobo. Ngisho ukuthi ingxenye yengonyama yokuhlelwa kokusebenza okuphezulu iqhubeka ngokuqhubekayo futhi ishintsha njalo ngonyaka (ngisho nenyanga). Uma usungusha lapha futhi ucabange ukuthi ungalungisa kanjani i-Amazon yakho yokuqala ohlwini - usuvele usendaweni efanele. Ngisho ukuthi kuyoba yisikhathi esihle ukuqhubeka nokudala isu.
Yiqiniso, izinjini ezinkulu zokusesha ezifana ne-Google ngokwayo kufanele zihlale zibeka phambili kuqala kwenombolo yakho - unifi ap upgrade firmware ssh. Kodwa kusukela kumbono we-e-commerce kanye nomqondo ofanayo webhizinisi lokuhambisa phansi phansi, i-Amazon akuyona into ebaluleke kunazo zonke yokuhweba inombolo yesikhulumi. Kodwa-ke, phawula ukuthi ukuze ukwandisa i-Amazon ibe nenqubo efanele, uzodinga ukuqonda okuyisisekelo nje ukubeka okungenani isu lakho lokuqala bese ulivuselela ngokuhamba kwesikhathi.
Ukwenza kanjalo, ungaba nephuzu elihle lokuqala futhi uzizwe ulungele ukuhambisa - ngenhlanhla, i-Amazon search algorithm ayiyona eyinkimbinkimbi njengeyasetshenziswa yi-Google. Ngemuva kwalokho, alishintshi njengesihluku futhi ngokuphindaphindiwe njengokwama-algorithm amaningi okusezingeni elibanzi lokucinga kwezwe elibheja phambili. Ngakho, ngezansi ngizokubonisa uhlu lwamaphoyinti e-bullet ukukusiza ukwandisa uhlu lwe-Amazon ngengxenye yengqondo - okungenani ukugwema imiphongolo evame kakhulu ejikeleza isayithi.
Ukuqonda Okuyisisekelo Sokuthuthukiswa Kwesisekelo e-Amazon
Ngaphambi kokungena kulolu daba futhi nginikeza amathiphu awusizo wokulungisa uhlu lwe-Amazon ngendlela efanele, ngivumele ukucindezela futhi - i-Amazon ihluke kakhulu kunoma yiziphi ezinye izinjini ezifana ne-Google ngokwayo. Ngisho ukuthi amanye amathiphu namasu angase avele afana nawo. Noma kunjalo, ukuqonda ukungezwani okuyisisekelo kanye nezindlela ezibonakalayo ezifanayo - yilokho okuyiyona inselele kunazo zonke laphaya.
Masenze umehluko phakathi kwe-Amazon ne-Google Search Engine
CTR vs. Ukwaneliseka - isipiliyoni somsebenzisi-friendly kanye nokuguqulwa yiwona amaphuzu okuqala ahluke ngokuphelele I-Amazon ne-Google..Ngenkathi i-giant yokusesha yakhelwe ukuthengisa izikhangiso, indawo enkulu yemakethe yomhlaba ihlose ukuthengisa imikhiqizo. Ngokulinganisa ukusebenza okuphumelelayo, kusho ukuthi i-Amazon incike ekuhloleni imali engenayo (ngaphandle kwalokho, umkhawulo ophelele ngokuseshwa), phakathi kwe-Google ngokwemvelo ukubheja kumethrikhi ye-web esemqoka, njenge-CTR noma isikhathi esiphezulu esichithwa ekhasini ngokuvakashela komsebenzisi.
Ukuhlelwa ngokumelene neprostration - kusho ukuthi ngenkathi inkomba e-Amazon ihlelwe ngokuphelele ngaphansi kwamafomethi athile, kukhona ukukhonsa okuncane okubonakalayo ku-Google ehamba kancane kancane ehlelweni oluhlelekile kusukela 2015.
Ku-Ikhasi Lokungaxhunyiwe - kusikisela ukuthi kufanele ukwandise uhlu lwakho lwe-Amazon olujikeleza kuphela -ukusebenza kwekhasi. Isibonelo, ukukhishwa kwesixhumanisi se-page-off kuyoba nomthelela osondelayo kwi rankings zakho zangempela, nakanjani akuthandi indlela ye-Google.
Ukuzibandakanya vs. Ukuqala - lapha siya ukungena ngokuqondile. Into yokuthi i-Amazon nje ayikhathaleli okuqukethwe kokuqala futhi okuyingqayizivele - ngenxa yokuthi iningi le-traffic yakho likhishwa njalo kusuka kusesha okusebenzayo selivele selithenga ngaphandle. Uma uneziqu ezithile ezilinganayo noma amaphuzu wezinhlamvu nganoma yiluphi olunye uhlu - ungakhathazeki. Ngakolunye uhlangothi, noma kunjalo, ukufaka isicelo sokuxolisa okukhulu noma ikhophi ye-copycatting ekuqinisekiseni ukufakwa ohlwini kwe-Amazon kuzobe kungamukeleki ngendlela efanayo - njenge-Google.